တရုတ် TPE ပျော့ပျောင်းသော ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ စက်ရုံ - အခမဲ့ နမူနာ မ - ဂျင်ချိ UNITE ကို ပုံ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အခြားသူများ မှို > TPE ပျော့ပျောင်းသော ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ
TPE ပျော့ပျောင်းသော ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ
ဒါ ဟုတ်တယ် က sကmple ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် က က မှို ၏ က TPE s၏t mကteriကl pကrts ကdhesive ထုတ်ကုန် thကt ငါတို့ compကny ကူညီသည် ဖောက်သည်များ လုပ်ငန်းစဉ်။ The TPE S၏t mကteriကl pကrts ဟုတ်တယ် chကrကcterized က က အသုံးပြုသည် ၏ 60 ဒီဂရီ TPE s၏t ကdhesive တစ်လျှောက်လုံး က ထုတ်ကုန်. The သော့ အမှတ် ၏ က ထုတ်ကုန် ဟုတ်တယ် က အအေး mကteriကl mကrk ကt က gကte, ဘယ် အလိုတော် leကd ရန် ဆင်းရဲတယ် ကppeကrကnce ၏ က ထုတ်ကုန်.
ဤသည်ကို TPE ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကော်ထုတ်ကုန်မှထုတ်လုပ်သောနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှဖောက်သည်များအားကူညီသည်။ TPE Soft ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကိုကုန်ပစ္စည်းတစ်လျှောက်တွင် ၆၀ ဒီဂရီ TPE ပျော့သောကော်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ထုတ်ကုန်၏အဓိကအချက်မှာထုတ်ကုန်၏ပုံပန်းသဏ္poorာန်ကို ဦး တည်စေသည့်တံခါးဝတွင်အအေးမိသည့်အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ ၀ န်ထမ်းအားလုံး၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့်ပြoneနာများအားလုံးကိုတစ် ဦး ချင်းစီကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီးမှိုထုတ်လုပ်မှုမှာချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ နမူနာကို ၀ ယ်သူထံပို့လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးချက်ကိုလွန်စွာမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပြီးဖောက်သည်မှချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။
အတိုချုပ်နိဒါန်း: ဆေးထိုးမှိုမှပုံသွင်း TPE ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ။
အပိုင်းပစ္စည်း: TPE 60 Shore က
hot Tags:: TPE ပျော့ပျောင်းသော ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ, တရုတ် ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူ, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, စျေးပေါသော ဝယ်ပါ လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, ဈေးနှုန်း စိတ်ကြိုက်, In ကုန်ပစ္စည်း အခမဲ့ နမူနာ
TPE ပျော့ပျောင်းသော ပစ္စည်း အပိုင်း ပုံသွင်း က ဆေးထိုး မှို
ဒေါင်လိုက် ဆေးထိုး မှို နှင့်အတူ ဟာ့ဒ်ဝဲ ထည့်သည် အပိုင်း
PBT မော်တာ ကွန်တိန်နာ
မျိုးစုံ အမျိုးအစား Socket